Usoro ndị agha Nsukka & Ndị na - eweta ya - Militarylọ ọrụ ndị agha China
Large-Capacity ozuzo N'èzí oyi azu paaki
Akpa akpa n'èzí nwere ite 30 nke nnukwu ikike. Ihe TPU na-adịghị mmiri, ọmarịcha nkọwa zuru oke, ikike buru ibu, na ogo na-eguzogide ọgwụ. Ma ị na-ama ụlọikwuu, picnic, outing, hiking, ma ọ bụ ọbụna a n'ezie n'ọgbọ agha, ọ pụrụ ịbụ n'ụzọ zuru ezu eru.
N'èzí Portable ozuzo Water Bag
Nzuzo maka ụmụ nwoke, ọdịdị ozuzo mara mma, ọrụ dị ike. Enwere ike ịhazi ihe eji arụ ọrụ gburugburu ebe obibi dị elu, ikike na ogologo ọkpọkọ. Ahụ nke akpa ahụ na-eguzogide ọgwụ ma ọ naghị emebi ngwa ngwa. Na-enye gị ohere ịgbanye mmiri ngwa ngwa.
Maa ụlọikwuu Hiking agba ọsọ Hydration eriri afo na tube
Akpa mmiri dị elu nwere nnukwu oghere. Jiri ihe nkiri kachasị mma na gburugburu ebe obibi na ngwa sitere na SBS a ma ama. N'iji teknụzụ obibi akwụkwọ nyocha, mbipụta doro anya ma ọ dịghị mfe ịda mba. Ngwaahịa ahụ na-a attentiona ntị na nkọwa ebe niile, naanị iji wetara gị ahụmịhe kachasị mma.
Mmiri eriri afo Nchekwa Hydration Hiking Camping Cygba ígwè
Ihe dị iche iche nke oroma na ndị agha na-acha akwụkwọ ndụ jupụtara na ejiji. Nzube nke uzuzu nke uzuzu nke ihe onu na ihe nkpuchi nke ihe nkpuchi mmiri na-egosiputa uzo zuru oke nke akpa mmiri a. Ọ bụghị naanị na ọ mara mma kama ọ nwekwara ike dị irè.
Good Quality N'èzí Sport Reservoir eriri afo azu paaki
Egwuregwu akpa egwuregwu egwuregwu n'èzí nke na-ewe adaba na ịdị oke arụ. O nweghi ihe o mere ma ị ifụọ mmiri, jupụta mmiri, ma ọ bụ hichaa akpa mmiri. Enwere ike ịrụ ọrụ niile ozugbo na-ewereghị akpa mmiri n'ime akpa. Maka gị ndị na-agba ọsọ megide oge na egwuregwu, ọ ga-abụ onye inyeaka kachasị mma.
Nkebi Nke: WBB-004
Aha ngwaahịa: Akpa akpa mmiri akpa mmiri
Ihe: Oxford EVA
Ojiji: ikgba ọsọ / Ntụrụndụ / Njem
N'èzí Sport Hydration eriri afo Army Green paaki
Ndị agha na-acha akwụkwọ ndụ hydration n'èzí. Ejiri ihe dị mfe EVA, ọ gaghị ebute gị ibu arọ. Na-enye gị ohere ịmegharị mmiri ngwa ngwa n'oge mgbatị ahụ. Ngwaahịa a dị nso na ume ma na-enweghị ịma jijiji, ma kwekọọ na ergonomic design.